Media sosialy Rock ao anatin'ny 30 minitra isan'andro | Martech Zone
Zoma, Martsa 29, 2013 Douglas Karr
Manana mpanjohy be dia be amin'ny media sosialy izahay ary mizara sy mamaly taonina mandritra ny mpihaino anay amin'ny media sosialy samihafa. Ekipa kely izahay, olona vitsivitsy fotsiny, saingy mieritreritra aho fa manao asa lehibe izahay amin'ny fanampiana ny mpamaky mandritra ny tontolo andro ary mamaly amin'ny fotoana fohy azy ireo. Izany dia nilaza… raha ny nataonay rehetra dia ny manara-maso, mamaly ary mizara amin'ny tambajotra sosialy mandritra ny tontolo andro, tsy azoko antoka fa hahavita asa izay tian'ny mpanjifanay hataontsika izahay! Ary farany dia mandoa ny faktiora eto izy ireo.
Manao izany izahay amin'ny alàlan'ny fampiasana fanangonana fitaovana lehibe. Iray amin'ny antony itiavako manoratra ity bilaogy ity. Ny fahitana fitaovana mora vidy izay manampy ny orinasanay hanara-maso, hamaly ary hampitombo ny mpihaino antsika dia lakilen'ny fahombiazan'ny marketing sy ny media sosialy.
Ny paikadin'ny media sosialy mandresy dia ny fiasan-tsaina feno fahendrena fa tsy amin'ny sarotra. Raha tsy orinasam-pandraharahana ianao dia 30 minitra isan'andro ny hany ilainao hampiorena ny media sosialinao. Miaraka amin'ny fitaovana mandeha ho azy toy ny Pardot hikarakarana ny be dia be amin'ny asa be loatra sy miverimberina, ny zavatra ilainao dia drafitra isan'andro voafaritra tsara sy fifehezan-tena. Avy amin'ny sary Pardot etsy ambany, Media sosialy Rock ao anatin'ny 30 minitra isan'andro.
Tags: Drafitra 30 minitrapardotautomatisation pardot marketingdrafitra media sosialy